Trump oo xeer illaaliyaha guud ku eedeeyay miji-xaabin - BBC News Somali
Trump oo xeer illaaliyaha guud ku eedeeyay miji-xaabin
Xiriirka u dhaxeeya Trump iyo Sessions oo sii xumaanaya
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay xeer ilaaliyaha guud Jeff Sessions iyo waaxda caddaaladda in ay dhaawacayaan fursaddii dib loogu soo dooran lahaa labo wakiil oo ka socda xisbiga jamhuuriga, maadaama ay dacwado ku soo oogeen.
Tallaabada raggaan loogu soo oogay dacwadaha waxay farahooda ka saareysaa "guul fudud" oo ay ka gaari lahaayeen doorashooyinka xilligga dhexe, ayuu Mr Trump ku soo qoray artiisa Twitter-ka.
Mid ka mid ah labada siyaasi ayaa lagu eedeynayaa ganacsi gudaha xafiiska ah halka kan kalena loo heysto eedeymo ku saabsan carqaladeynta shuruucda ol'olaha.
Qoraalkan cusub ee uu madaxweynaha ku shaaciyay Twitter-ka ayaa sare u sii qaadaya dhaleeceyn Mr Trump loogu jeedinayay inuu fara galin ku hayo howlaha waaxda caddaaladda.
Waxaa qeyrul caadi ah in madaxweyne xilka haya uu cambaareeyo xeer ilaalinta guud ama uu dood ka keeno dacwado la soo oogay xilliga doorashooyinka dhexe.
Waa maxay saameynta?
Arrintaan ayaa imaaneysa iyadoo la filayo in 6-da bisha November ay dhacaan doorashooyinka xilliga dhexe.
Xisbiga dimuqraadiga ayaa u xusul duubaya iney kuraas dheeraad ah ka helaan aqalka wakiillada si ay ugu sii xoogeystaan koontaroolkiisa oo ay hadda gacanta ku hayaan xisbiga Jamhuuriga.
Bishii la soo dhaafay ayaa Christopher Collins oo ka tirsan aqalka wakiillada lagu soo oogay dacwad la xiriirta fadeexad ku saabsan inuu ganacsi ku dhex lifaaqay xafiiskiisa. Balse isagu wuxuu beeniyay inuu wax khalad ah sameeyay wuxuuna sheegay in uusan ku dadaali doonin in dib loo soo doorto.
Dabayaaqadii isla bishii Agoosto ayaa Duncan Hunter oo isagana xubin ka aha golaha wakiillada lagu eedeeyay inuu lacago loogu tala galay ol'olaha doorashada u adeegsaday howlo shakhsi oo gaar ah, wuuna beeniyay eedeymahaas.
Labadan nin ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee taageerada siiyay Trump markii uu billaabayay raadinta xilka madaxweynaha waxaana cadow u noqday hogaamiyeyaasha siyaasadda ee garabka Dimuqraadiga.
Obama iyo Trump oo kulmay
Baaritaanka lagu sameynayo Mr Hunter ayaa billowday intii uu madaxweynaha ahaa Barack Obama, balse baaritaanka ka dhanka ah Collins ayaa la billaabay sannadkii la soo dhaafay.
Dowladdu ma mid daciif ah baa?
Waaxda caddaaladda ayaan wax jawaab ah ka bixinnin eedeymaha cusub ee uga yimid dhinaca madaxweynaha, balse waxay ka dhiidhisay dhaleeceyn kale oo ka soo yeertay dhinacyo kale oo ay ku jiraan siyaasiyiin ka tirsan xisbiga Mr Trump.
Senetor-ka xisbiga Jamhuuriga ee lagu magacaabo Ben Sasse ayaa sheegay in waaxda caddaaladda looga baahanyahay in ay dhex dhexaad ka ahaato siyaasadda iyo go'aannada ku aadan in dacwado lasoo oogo iyo in kale.
"Mareykanku ma aha dowlad yar oo daciif ah oo caddaaladdeedana ay xisbiyo labo dhinac ah kala jiidanayaan- mid aqlabiyad leh iyo mid laga tiro badanyahay. Labadaan nin waxaa loo dacweeyay arrimo dambi ah oo cadeymo loogu hayo, kumana xirna ciddii madaxweyne ahayd markii dambigaas la geysanayay," ayuu yiri.
Trump oo Kim ku yiri hadal dhegaha u roon
Xiriirka u dhaxeeya Trump iyo Sessions ma sii xumaanayaa?
Madaxweynaha ayaa si is daga joog ah cambaareyn xaga afka ah dhawaanahaanba u jeedinayay xeer ilaaliyaha guud.
Eedeymaha ayaa billowday bilihii ugu horreeyay ee sannadkii hore, markaasoo Mr Sessions uu iska badbaadiyay baaritaannada la xiriiray in Ruushka uu Trump ku caawiyay guushii uu ka soo hoyiyay doorashadii 2016-ka.
Mr Trump ayaa aad tallaabadaas ugu dhaleeceeyay xeer ilaaliyaha oo uu ku tilmaamay mid isaga kaligiis is badbaadiyay oo daacadnimadiina ay ka dhammaatay.
Muqmad/Oodkac iibiyihii isubedelay fannaan caan ah
Qodobbada madaxweynaha cusub Xasan Sheekh u sahlay guusha
18 Maajo 2022
Ninka bilyan-dheerka ah ee hantidiisa ka arradnaa
Xilligan kala guurka dalka Soomaaliya yaa maamula?
Faransiiska oo ka carooday magaalo iskeed haweenka Muslimiinta ugu oggolaatay inay diintooda ku dhaqmaan